Home News Xildhibaano Itoobiya u diray Warqad Cabasho ah iyo wararkii ugu dambeeyay!!
Xildhibaano Itoobiya u diray Warqad Cabasho ah iyo wararkii ugu dambeeyay!!
Qoraalka ay Xildhibaanadaasi soo saareen waxaa ku saxiixnaa Afhayeenka Kooxda Xildhibanaadda ee la magac baxay Badbaado Qaran (NSC), Dr. C/fataax Ismaaciil Daahir.
Previous articleMaamulka K/galbeed oo yiri’’Dowlada Soomaaliya ayaa xoog ku waday Musharax Muqtaar Rooboow waxba kama ogeeyn inagu!!
Next articleBaydhabo oo ay suuragal tahay in ay ka dhacdo doorasho aan la isku-raacsaneeyn iyo Musharaxiinta oo!!
Maamulka Gobolka Banaadir oo lagu Eedeeyay in uu Xaqiijinta...